क्याम्पसभित्रै टायर बालेर आन्दोलन,पठनपाठन ठप्प – खोज केन्द्र
» खोज रिपोर्ट » प्रदेश » शिक्षा/कला » समाचार » समाज » सूचना/प्रविधि अंक: 1836
क्याम्पसभित्रै टायर बालेर आन्दोलन,पठनपाठन ठप्प
‘कलेजको ८० प्रतिशत अध्यापनको लोड आँशिक शिक्षकबाट नै छ। उनीहरूले कक्षा नलिएपछि क्याम्पसको पढाइ ठप्प छ। अझ यो समय भनेको विद्यार्थीका लागि पिक आवर हो। तर, माथिबाट ठोस जवाफ नआएसम्म यहाँबाट केही गर्न सकिन्‍न’ उनले भने।
‘न पढाइ हुन्छ? न त विल्डिङ सही छ? न लाइब्रेरीमा किताब छ? न त शिक्षक नै? कलेजमा पानी शैचालय समेतको सामान्य व्यवस्था समेत क्याम्पस प्रशासनले नगरे पछि बाध्य भएर अलि आक्रोशित हुन परेको छ’ उनीहरूले भने ‘पढाइ होस्। सामान्य क्याम्पस भन्‍न सुहाउने पूर्वाधारको व्यवस्था होस् हामी कुनै आन्दोलन गर्दैनौँ।’